editor — Sat, 10/24/2020 - 08:23
भीर पहरामा जानु पर्दैन,
शीतल छहारीमुनि बस्नु पर्दैन
प्रेयसीलाई पर्खिनु पर्दैन,
एकान्त ठाउँ रोज्नु पर्दैन,
चारिटा मैथिली हाइकु - २५ (चंदन गाछ)
editor — Sat, 10/24/2020 - 08:19
ससरे साँप ।
बहैत बाल गंगा
पवित्र भूमि ।
जस्को कतै घरै छैन
dotpen — Fri, 10/23/2020 - 20:37
ज्यान ज्ञान झिनो नै छ, कसरी बज्छ बाँसुरी ?
जस्को त ब्याग नै छैन, सुको नै पस्छ के गरी ?
ध्यानमा मग्न नैआत्मा, अशान्त हुन्छ के गरी ?
गन्दगी नै जहाँ छैन, झिँगा बस्छ त के गरी ?
jituladhar — Thu, 10/22/2020 - 05:54
सरकारलाई मात्र गन्न आउँछ,
१,२,३,४... गर्दै मरेकाहरूकाे लास !
हाे, सरकारलाई मात्र गन्न आउँछ,
१,२,३,४... गर्दै दशैं भत्ताकाे रास !
सडकमा काेही सुत्नु परेकाे छैन,
भाेकभाेकै काेही बस्नु परेकाे छैन,
हाे, सरकार भन्छ, भन्छ र भन्छ मात्रै,
दुई मुक्तक टुक्रा (चराको कुनै देश हुँदैन)
nrsubba — Wed, 10/21/2020 - 17:58
चीत्कार मुक्तक सङ्ग्रह
चराको कुनै देश हुँदैन
छल्ने उसको कुनै भेष हुँदैन
खस्दैन जहिले उडिरहन्छ, जहाँ
धोका दिने कुनै परिवेश हुँदैन ।
जिन्दगीमा सम्पतिभन्दा मलामी धेरै होस
Suresh Gautam — Tue, 10/20/2020 - 21:40
जवानीको भन्दा मोल खरानीको धेरै होस
लाग्दैन मलाई यो जीवनको केही अर्थ छैन
कामनाले मात्र हुदैन, संसार उज्यालो होस
Dahal — Mon, 10/19/2020 - 13:38
ऊ थियो महिमा, खासै भएन
गए पछि भेट्ने, आशै भएन
ऊ गयो जब यी, आँखा रसाए
फेर्न खोजें तर, सासै भएन
निस्तब्धता छायो, रोकियो बोली
सायद कुरा गर्ने, भाषै भएन
आइदेऊ तिमी गीत बनेर
Hari Thapa — Sat, 10/17/2020 - 11:46
आइदेऊ तिमी मेरो गीत बनेर
आँखाको गाजल जस्तै प्रीत बनेर
कोमल तिम्रो लजालु अधरमा
बैशालु यौवन मदहोसी नजरमा
राखेर सपना लहरै लहरमा
म भुले माया रहरै रहरमा
HomSuvedi — Tue, 10/13/2020 - 13:10
प्रतिभा निकुञ्जको अभ्यास
राम नै प्रेम हुन् प्रेम सीता पनि
प्रेम आराधना हो तपस्या पनि ।।
प्रेम पेवा हुने याे नठानून् युवा
प्रेम गर्छन् यहाँ ज्येष्ठ पाका पनि ।।
दुई किनारका गीत
editor — Sun, 10/11/2020 - 12:44
तिमी मेरै हुनुपर्छ भनेको नि होइन
तर तिम्लाई नसम्झेको कुनै पल छैन ।
पत्थरमा फूल रोपेँ कसरी हो फूल्ने
छैन कुनै बाटो अब तिमीलाई भुल्ने
editor — Sun, 10/11/2020 - 12:28
भुल्ने साझ र रातमा क्षितिजका तारा नियाली किन ?
पोल्ने यो मन,को पकाउछ ?भनी तर्कन्छु रातों दिन ।
बाढी आउछ यो अतीत दिलमा पौडन्छु गंगा सरी ।
हाँस्ने दिक्क हुदा सँधै घरिघरी सम्झेर ती निर्झरी ।।१।।
editor — Sun, 10/11/2020 - 12:23
विश्व मानव जगत् कोरोनाको आगोमा पिल्सिइरहेको थियो । बुद्धको देशमा पनि युद्धको ऐलान दिँदै कोरोना भाइरस कोभीड १९ले उग्र रूप लिँदै थियो । सारा प्रकृति उही र उस्तै गतिमा चलिरहेको थियो । मात्र मान्छे घररूपी सुन्दर जेलमा बन्द थियो । सडकमा चहलपहल मन्द थियो । लकडाउनको शून्यता चारैतिर नाचिरहेकै थियो । ठिक त्यही समयमा कुसुमपुरीको भीमसेन टोलमा एउटा घरको अर्ध खुला सटरभित्र एक जोडी गौँथली भित्रिन्छ ।
साहित्यिक कार्यक्रम र चाँदनी रातहरू गीती संगालो विमोचनको एक झलक
कता गयो खोइ मेरो जुरेली (एकल लोकगीत)
धर्मगुरूको भेषमा शैतान (अनूदित लघुकथा)
को हौ तिमी?
आँसु पिएको छु
मायाको सिरानी आँखामा छ
भाँच्यौ किन ?
वेदसार : महा-वाक्य
अधिक समय म आफ्नै कामकाजले मजबुर छुँ